Tag: liiska liiska | Martech Zone
Tag: liiska liiska
Subaxaan waxaan wadaagnay 7 istiraatiijiyad oo ku saabsan kordhinta kharashka macaamiisha ee goobta tafaariiqdaada. Waxaa jira farsamooyin ay tahay inaad ku daadiso goobtaada e-commerce sidoo kale! Dan Wang wuxuu la wadaagay maqaal ku saabsan ficilada aad qaadi karto si aad u kordhiso qiimaha gawaarida dukaameeyaha ee Shopify iyo ReferralCandy wuxuu ku sharaxay ficiladaas faafaahintan. 14 Istaraatiijiyooyinka loogu talagalay Kordhinta Dakhliga ee Goobtaada Ecommerce Waxay ku hagaajineysaa nashqaddaada dukaanka adoo aruurinaya jawaab celin iyo tijaabin
Mid ka mid ah su'aalaha aan sida joogtada ah u helo ayaa ah in aan ka warqabo iyo in kale ka warqabid ka mid noqoshada xubinimada wanaagsan ee WordPress. WishList waa xirmo dhammaystiran oo u rogeysa boggaaga WordPress goob gebi ahaanba xubinnimo xubin ka noqota. In ka badan 40,000 boggag WordPress ah ayaa horeyba u shaqeynaya softiweerkan, sidaas darteed waa la caddeeyay, ammaan yahay oo la taageeray! Astaamaha Goobta Xubinnimada WishList Ku dar Heerarka Xubinnimo ee Aan Xaddidnayn - Abuur Qalin, Dahab, Platinum, ama heerar kasta oo kale oo aad rabto! Lacag badan ka qaado heerarka sare ee